Iza no tompon-daka eran-tany amin'ny bisikileta amin'izao fotoana izao? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Tompondaka eran-tany amin'ny bisikileta - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Tompondaka eran-tany amin'ny bisikileta - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Iza no tompon-daka eran-tany amin'ny bisikileta amin'izao fotoana izao?
nyamin'izao fotoana izaolahyTompon-dakadia ilay mpitaingina italiana Filippo Ganna, izay nandresy tamin'ny hetsika 2020.
Amin'ity lahatsoratra ity dia handeha hamaky ny sasany amin'ireo mpihanika tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra isika. Ireo mpitaingin-tsoavaly manana refy mahery vaika amin'ny lanjany izay manampahaizana manokana amin'ny fiakarana tendrombohitra amin'ny hafainganam-pandeha mahavariana. (Booming) Niezaka mafy izahay nanao lisitr'ireo mpihanika fito lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra, saingy araka ny azonao an-tsaina, sarotra ny manapaka an'io isa io.
Alohan'ny hanombohantsika dia manana fandavana aho fa hamaky mafy momba ny hazakazaka mahafinaritra, fiaretana miavaka ary ny tanjaky ny atletisma. Raha mifikitra amin'ny mpamily fito isika dia tsy maintsy ihodivirana ny mpamily sasany. Ankoatr'izay, ny fampitahana amin'ny taranaka dia toeram-pitrandrahana.
Tsy hay ny hahafantatra ny ho fizotr'i Chris Froome amin'i Eddy Merckxor raha nilatsaka i Pantani Coppi; niova ny fitaovana, niova ny hazakazaka, niova ny arabe ary matetika no tsara lavitra noho ny lalana gravel ankehitriny ny 1920. Ary koa ho an'ny ampahany lehibe amin'ny tantaram-panatanjahantena dia mbola tsy nisy ny fanindronana zava-mahadomelina. Vantany vao vita ny fandavana dia andao hanomboka. (mozika upbeat) Ny laharana voalohany amin'ny lisitray dia i Marco Pantani.
Iray amin'ireo mpihanika miavaka indrindra amin'ny taranany. Ankehitriny ny italiana dia manana teny ilazana ny mpihanika ary izany dia Scallatore, anarana iray hafa ho an'ny mpihanika toa an'i Pantani, izany hoe Scatista. Ity dia teny iray omena an'ireo mpihanika izay afaka manafaingana hatrany na dia eny an-tampon'ny havoana tampoka aza ary mamono ny mpifaninana aminy.
Ankehitriny dia fantatry ny loha sola na misaron-doha foana i Pantani, ny kavina amin'ny sofina ary io goatee io sy ny fisehoany no nahazoana anaram-bosotra, el pirata na piraty. Fantatra ihany koa izy tamin'ny fihanika fiakarana, saika avy eo amin'ny lasely sy ny latsaka. Saingy tsy ny endriny na ny fombany miakatra.
Ny tena nahagaga azy dia ny fahafahany mianika tendrombohitra toy ny angady. Ary io fahaizana io no nahatonga azy handresy ny zava-bita tsy fahita firy, ny Tour de France sy ny Giro d'Italia, tamin'izany fotoana izany, tamin'ny taona 1998. Ny taona manaraka, tamin'ny 99, dia nanjakazaka tamin'ny Giro d'Italia indray izy, Nahazo inefatra efatra ary nitarika ny hazakazaka saingy rehefa niverina ny fitsirian'ny fampidiran-dra dia avo loatra ny hematokritany ary noroahina hiala ny hazakazaka Pantani dia tsy mpitaingina azy intsony ary nampalahelo fa maty tamin'ny fanapoizinana kokainina 2004 izy. (mozika mitohy) Amin'ny andro maoderina, Chris Froom dia nanjakazaka tamin'ny Grand Tours.
Hatreto dia efa nandresy in-efatra tamin'ny Tour de France izy, nandresy ny Giro d'Italia tamin'ny 2018 ary nandrombaka ny Vuelta a Espana, indroa izao. Raha vantany vao miakatra ny raharaha dia toa manana tombony i Chris Froome. Tany Kenya no nahalalan'i Froome voalohany ny talenta nananika, izay nilaza fa nandany fotoana be tany amin'ny Nairobi Mountains.
Indraindray koa izy nitoby teo. Fa ny fanolorantenany sy ny hamafin'ny fony dia tsy hoe teo amin'ny bisikileta ihany no hita, fa koa nanala azy. Toa nisy fotoana nampiasainy ny kaonty Hotmail an'ny Kenyan Cycling Association handefa mailaka ny fikambanan'ny fanatanjahantena, ny UCI, nampahafantatra azy ireo fa handefa ekipa U23 ho an'ny Tompondaka Erantany i Kenya.
Izao dia azoko lazaina tsara fa ny fihanihan'i Froome amin'ny lohany ary miondrika ny kiho dia tsy dia kanto indrindra. Ity dia fantatra voalohany tao amin'ny Vuelta a España tamin'ny taona 2011 izay nahavitany faharoa tamin'ny voalohany fa vao haingana no natokana ho mpandresy amin'io hazakazaka io. Ny taona manaraka dia nanampy an'i Bradley Wiggin izy hahazo ny amboara Tour de France 2012, nahavita ny laharana faharoa tamin'ny fizotrany, saingy tamin'ny 2013 izy no tena nanao anarana ho an'ny tenany.
Tsy azony natao ny nijanona tsy nandresy tamin'ny fitsidihan'i Oman tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Tany amin'ny Critérium International, Tour de Rome izy ary nanao ny Critérium du Dauphiné ary mazava ho azy ny Tour de France. Raha toa ka esorinao tsy ho amin'ilay fampitahana i Lance Armstrong, ny taona manaraka dia izy no mpitaingin-tsoavaly voalohany niaro tamim-pahombiazana ny anaram-boninahiny nanomboka tamin'i Miguel Indurain tamin'ny 1995.
Nandresy fitsidihana roa hafa avy tao amin'ny Fra nce izy taorian'izay, ary tamin'ny taon-dasa dia izy no mpitaingin-tsoavaly voalohany nitana ny lohateny Grand Tour telo tamin'ny fotoana iray nanomboka tamin'i Bernardino 1983. (mozika mitohy) Mety tsy hanana lisitr'ireo mpihanika tsara indrindra manerantany Raha tsy misy an'ity lehilahy ity Federico Bahamontes, izy no lasa mpitaingina voalohany teo amin'ny tantara nahatratrarana ny triplet asa, nandresy ny fifaninanana King of the Mountains sy ireo Grand Tours telo.
Nandresy ny Tour de France izy tamin'ny 1959, mazava ho azy fa izy no nahazo ny King of the Mountains, ary raha ny marina dia nahazo ny loka King of the Mountains ankapobeny tsy latsaky ny enina tao amin'ny Tour de France fotsiny izy. Manana anaram-bosotra izy, ary izany dia ny Voromahery Toledo. Toledo no faritany kely any afovoan'i Espana izay misy voromahery satria isaky ny miakatra ny làlana dia manidina toy ny voromahery izy.
Misy ihany koa ny tsangambaton'ny Bahamontes ao Toledo, nomen'ny Fundacion Sulest hanehoana sy hanomezam-boninahitra an'izay rehetra vitany tamin'ny bisikileta. Mbola miakatra hatrany mandraka androany izy io. Tena angano fiakarana tanteraka. (mozika upbeat) Mpitaingina roa amin'ny tantaran'ny bisikileta ihany no nahazo ny fanasokajiana ny King of the Mountains tamin'ireto Grand Tours telo ireto, noho izany dia misy dikany be ny fananana azy roa eto.
Mandrosoa, Luis Lucho Herrera. Nihoatra ny sasany tamin'ireo zava-dehibe tamin'izany fotoana izany izy, anisan'izany i Sean Kelly, Bernardino ary i Laurent Fignon. Ary tamin'ny 1984 dia naka izay saika tsy isalasalana fa ny fandresena lehibe indrindra amin'ny bisikileta Kolombiana izy, io no Tour de France voalohany nataony, dingana faha-17 izy io ary nifarana tany Alp d'Huez.
Nanafika izy ary nandatsaka ny sasany tamin'ireo lehibe tamin'izany fotoana izany. Vignon, Ena, ary Robert Miller koa, ary amin'ny ankapobeny dia tsy nahita azy intsony izy ireo. Tamin'ny 1987, na izany aza, nanamafy ny maha-mpitaingina tendrombohitra malaza azy izy tamin'ny naha lasa Amerikana Tatsimo voalohany nandresy tamin'ny Grand Tour izay Vuelta.
Na dia telo minitra nifanandrinana tamin'i Sean aza izy. Resy i Kelly tamin'ny fotoam-pitsarana tsirairay. Na izany aza, raha vantany vao nizotra ny lalana, dia tsy niherika intsony izy ary hanafika ireo mpifaninana aminy saika isaky ny misy fotoana, eny fa na dia eo amin'ny dingana faha-11 nahavita an'i Lagos de Covadonga aza.
Nanafika ny mpifanandrina aminy indray izy, nandresy tamin'ny sehatra ary naka fotoana ampy ihany koa mba hahatongavany ho mpihazakazaka Kolombiana voalohany nitarika tamin'ny Grand Tour. Tena sarotra ny manantitrantitra ny maha-zava-dehibe an'i Herrera tamin'ny bisikileta Kolombiana. Raha ny tena izy, ny vondrona manan-talenta mihanika any Kolombia dia manaraka ny làlana nalehany ho azy ireo tamin'ny 1980. (mozika upbeat) Ity lehilahy ity dia mety ho adihevitra tsara amin'ny maha-mpitaingina bisikileta Espaniola azy tsara indrindra hatrizay, saingy tsy noho ny fandreseny tamin'ny Tour de France tamin'ny 1973 na ny Vuelta 1970 no anisany an'i Ocana.
akanjo mandeha bisikileta
Bebe kokoa noho ny fanararaotany rehefa nanafika tamin'i Jose Manuel Fuente teo amin'ny Col du Galibier sy ny Col du Télégraph izy ary nahazo fito minitra tamin'ireo mpifaninana nahery setra azy ireo. Ho ahy, na izany aza, tamin'ny 1971 no nanamafisany ny toerany ho toy ny angano fiakarana. Tamin'ny farany dia voatery nisintaka tamin'ny akanjo mavo izy.
Fa ny fanararaotany dia tsy natomboka raha tsy tamin'ny dingana fahavalo namarana ny Puy de Dôme. Tao izy nahatsapa zavatra izay tsy fahitan'ny ankamaroan'ny mpamily hafa, fa marefo i Eddy Merckx. Nanafika izy ary niditra teo amin'ny sehatry ny Windsor, ary na dia 15 segondra monja aza no vitany tao Merckx, izany dia mariky ny ho avy.
Na izany aza, teo amin'ny dingana 11 izay tena nampisehoany ny kilasiny. Sehatra tendrombohitra 134 kilometatra fohy. Fiakarana voalohany amin'ny andro, nataon'i Joaquim Agostinho.
Nahagaga fa afaka nandatsaka an'i Eddy Merckx teo noho eo ry zareo. Saingy tsy afa-po tamin'izany i Ocana iray, nanafika indray ary nandeha irery 60 kilometatra miala ny farany. Eo an-tampon'ny fiakarana antoandro amin'ny andro, ny nitarihany ilay mpitaingina manaraka teny an-dalana dia efatra minitra ary enina hatramin'ny farany.
Ny mpandresy Tour de France intelo, Louison Bobet, dia nanambara fa ny zava-bitan'ity sehatra ity dia mitovy tsara amin'ny fanafihana solo malaza an'i Fausto Coppi. Mpihanika mendrika izao. (mozika mitohy) Araka ny hevitro, ny mpitaingin-tsoavaly rehetra izay mendrika ny anaram-bosotra hoe 'Angel of the Mountains' dia mendrika ny hanana toerana amin'ity lisitra ity.
Charly Gaul dia mpitaingina bisikileta avy any Luxembourg izay sambany nitaingina ny tendrombohitra tamin'ny taona 1950 tamin'ny Tour of Austria. Vao 17 taona izy fa nandresy sehatra teo amin'ny Grossglockner dia tena mandeha araka ny drafitra, navelany ny ankamaroany, saingy tamin'ny 1955 no nametrahany ny saka teo amin'ireo voromailala. Tsy nahay izy tao amin'ny trano fonenana, ny ampahany dia noho ny ekipa malemy be, fa raha vao nankany an-tendrombohitra sy Alpes izy dia tena nanararaotra azy.
Nisy sehatra iray izay namakivaky an'i Galibier sy ny Col Du Télégraphe, ary tao izy no nitondra fiara 14 minitra sy 47 segondra tamin'ireo mpifaninana rehetra taminy. Izy io no nitondra azy avy amin'ny GC faha-37 ka hatramin'ny toerana fahatelo. Ary rehefa namely ny Pyrenees ny hazakazaka dia nanomboka nanafika indray ary nandresy tamin'ny faha-17.
Louis Bobet, mpandresy. Ireo zava-bita ireo dia nahazo azy fandresena tamin'ny fifaninanana King of the Mountains ary dingana fahatelo teo amin'ny lampihazo, ary izany dia ohatra iray fotsiny amin'ny fomba hiverenan'i Charly Gaul rehefa mandeha any amin'ny firaketana an-tendrombohitra noho ny fiakarana an'i Mont Ventoux, adiny iray roa minitra sy sivy segondra, ary raha jerena fa tsy dia tsara loatra ny tarehiny tamin'izany fotoana izany, mahatalanjona tokoa ny nandraisan'i Jonathan Vaughters 31 taona hanapahana io fotoana io. Manana mpamily iray izahay, izay nandresy ny fanasokajiana ny tendrombohitra intelo tao amin'ny Gira Rosa ary nandresy tamin'ny Grand Booke ihany koa ary mpanolotra GCN haingana indrindra hatrizay. Mazava ho azy fa miresaka momba an'i Emma Pooley aho.
Niverina indray ny iray amin'ireo fahombiazany tamin'ny fiakarana nahagaga indrindra tao amin'ny Giro Rosa 2014. Nisy dingana be tendrombohitra telo tamin'ity taona ity, anisan'izany ny fahatongavan'ny tampon'isa tampoka tamin'ny dingana valo sy sivy, ary nandresy daholo i Emma. Nandresy ny fanamby Taiwan KOM indroa koa izy, izay nifarana tamin'ny 3,275 metatra ambonin'ilay haavo A eo amin'ny Passing Wuling.
Ary tamin'ny 2017, 16 minitra no napetrany tao amin'ny mpifaninana akaiky azy indrindra ary 20 minitra tao Si 'Richardson, na dia tsy voatery hahatonga anao ho mpihanika tendrombohitra mahafinaritra aza izany. Na dia tsy afa-po amin'ny fiankinan-doha amin'ny bisikileta fotsiny aza izy dia mahay tsara amin'ny bisikiletany ihany koa, mifaninana matetika amin'ny triathlons an-tendrombohitra ary efa nanao ny Alpe d'Huez taloha -Mihazakazaka lavitra ary mandray anjara amin'ny tendrombohitra ihany koa hetsika mihazakazaka. Eny, araka ny nolazainay tao amin'ny disclaimer tamin'ny fiandohan'ity lahatsoratra ity dia sarotra be ny manangona ny lisitr'ireo mpihanika tendrombohitra fito tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Azoko antoka fa nafoinay ny sasany amin'ireo tianao indrindra ary raha mahazo ny vintana izahay dia ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany. Fa sarotra be fotsiny ny mampitaha ny mpamily amin'ny vanim-potoana samihafa. Na izany aza, manana angona GPS izahay izao.
Ao anatin'ny 50 taona dia azontsika atao ny mampitaha ny mpamily rehetra mandritra ny 50 taona ho avy, izay mety. Eny ary raha tianao ny fomban'ity akanjo ba nentim-paharazana Espaniola itako ity izao dia azonao atao ny manafatra azy io alohan'ny alàlan'ny atshop.globalcyclingnetwork.com Misy rohy mankany aminy ao amin'ilay famaritana eo ambanin'ity lahatsoratra ity ary raha tianao ny Mianara manao izany Afaka mianatra mihanika tena tsara kokoa avy any amin'i Emma Pooley ianao! Eto ambany ny lahatsoratrao.
Hafiriana no tompon-daka amin'ny bisikileta?
HITRANGATsy ho elamiaraka amin'ny Sports Tours International. nyFIALàlanaTompondaka eran-tanydia hetsika isan-taona izay atao isaky ny volana septambra. Amin'ny 2021 dia atao any Flanders, Belzika izy ary hanatontosa hazakazaka 11 mandritra ny 9 andro.
(bas bass lalina) - Amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny hevitry ny UCI izahay, ny fomba ahazoana azy, ny lanjany amin'ny hazakazaka Tour de France isan-karazany, hazakazaka iray andro sy hazakazaka dingana iray herinandro ary ny tena zava-dehibe dia maninona izy ireo no manan-danja ary maninona ianao Voalohany, holazainay ny antony itadiavan'ny mpitaingina isa UCI. Rehefa mifaninana amin'ny hazakazaka laharana UCI ny mpitaingina safidy, dia misy ny safidy hanangona ny isa UCI ary ireo teboka ireo dia mandray anjara amin'ny filaharan'ny mpitaingina tsirairay, ny ekipa mpivarotra ary koa ny firenena. Zava-dehibe izao ny teboka satria ny mpamily sy ny ekipa dia mila quota na isan'ny isa amin'ireo mba hahafenoany fepetra amin'ny hazakazaka ambony.
Ny isa izao dia tsy vitan'ny hoe mahazo loka fotsiny, fa fitaovana tena ilaina handrefesana ny lanja sy ny refesin'ny mpamily, ary mora raisina izany rehefa mifampiraharaha amin'ny fifidianana ny hazakazaka, ary koa ny karama sy ny fifanarahana. Ho an'ny taona 2019 dia hisy fiovana maromaro ary ny zavatra voalohany manamarika dia ny fisian'ny isa mitokana ho an'ny isa naoty tamin'ny hazakazaka iray andro amin'ireo izay nahazo hazakazaka an-tsehatra. Midika izany fa ny mpitaingina toa an'i Chris Froome dia mety hanana laharana hazakazaka avo lenta ary mety ho fametrahana ambany kokoa amin'ny hazakazaka iray andro izay misy olona toa an'i Peter Sagan, antenainao ny hanana laharana ambony isan'andro sy hazakazaka ambany kokoa - Manana ny laharana.
Ary misy olona toa an'i Alejandro Valverde, eny, mety ho ambony ihany izy mianadahy. Ary vaovao ho an'ny taona 2019 io, teo aloha, isa naoty tao anatin'ny iray andro ary natambatra avokoa ny hazakazaka an-tsehatra. (Hira Hip-hop) Ny isa azon'ny ekipa dia isaina amin'ny fanampiana ireo isa UCI azon'ireo mpitaingina ny ekipa fa zava-dehibe satria ny ekipa dia tsy maintsy mahazo isa isan'ny UCI mba hitazonana ny lisansa UCI World Tour, na amin'ny tranga sasany dia mendrika ho an'ny iray, ary ho an'ny vanim-potoana 2019 dia tsy misy afa-tsy slot 18 ho an'ny ekipa UCI World Tour Araka ny fitsipiky ny UCI, ny fahazoan-dàlana ho an'ny World Tour dia omena noho ireto fepetra manaraka ireto: ny fepetra fanatanjahantena, fitsipi-pitondrantena, ara-bola, ara-pitantanana ary ara-pitantanana.
Mba hahazoana fahazoan-dàlana amin'ny World Tour dia tsy maintsy fenoina ireo fepetra rehetra ireo. Miaraka amin'ny lafiny fanatanjahantena Raha misy mpangataka lisansa betsaka kokoa noho ny isan'ny fahazoan-dàlana betsaka indrindra mahafeno ny fepetra etika, ara-bola, ara-pitantananana sy ny fandaminana, ny lisansa dia manapa-kevitra ny komisiona nc eo amin'izy ireo miorina amin'ny isan'ny isa UCI azony. Mba hialana amin'ny fahaverezan'ny fahazoan-dàlana amin'ny World Tour dia mila manangona isa ny ekipa ary izany dia mitondra antsika amin'ny fanovana lehibe manaraka ho an'ny taona 2019 izay tokony ho fantatrao, ny UCI dia te hampitombo ny ekipan'ny World Tour manomboka amin'ny 18 amin'ny 2019. , toy ny amin'izao fotoana izao, hampihenana. hatramin'ny 16 ho an'ny 2020.
Ary midika izany fa ny ekipa roa izay mahazo ny isa kely indrindra amin'ny UCI amin'ity vanim-potoana ity dia hahemotra ho an'ny 2020. Ny Tour, fantatra amin'ny anarana hoe Pro Continental, dia hanana fotoana handray anjara amin'ny hetsika UCI toy ny Tour de France sy ny kilasy iray andro. Manana anarana vaovao ihany koa izy io, Pro Continental taloha, fa ho an'ny taona 2019 dia hatao hoe UCI Pro Series Division. (mozika miadana) Ka ny laharan'ny UCI isam-pirenena, izao dia zava-dehibe ireo satria izy ireo no mamaritra ny isan'ireo mpitaingina firenena afaka mametraka amina hetsika sasany toy ny Tompondaka Erantany na ny Lalao Olaimpika.
Izao koa dia lazain'izy ireo amintsika hoe firenena iza no tsara indrindra (mihomehy) ary Great Britain izao. Espana io. (misento) - Andriamanitra ô - Ny laharana dia isaina amin'ny fampifangaroana ireo mpamily valo tsara indrindra amin'ity firenena ity eo am-piandohana amin'ireo mpamily valo, ireo firenena amin'ny toerana 11 ka hatramin'ny 20 dia afaka manomboka amin'ny mpamily enina, ireo firenena amin'ny toerana 20 ka hatramin'ny 30 dia mety hanana efatra ny mpamily sy ny firenena amin'ny toerana 31 ka hatramin'ny 50 dia afaka misoratra anarana mpamily ao amin'ny 50 voalohany, fa raha misy mpamily manana toerana ambony 200, dia afaka manomboka koa io olona io. (Hira Hip-hop) Ny loka dia azo amin'ny alàlan'ny fahazoana toerana ambony amin'ny hazakazaka UCI ary arakaraka ny maha-malaza azy ny hazakazaka no isaina dia hita taratra amin'ny hazakazaka toy ny Tour de France ary ny fandresena ankapobeny amin'ny Tour no tokana tokana lehibe indrindra isa azon'ny mpitaingina.
Hahazo isa 1.000 ianao ary homena isa hatramin'ny faha-60 ihany koa ny isa. Toy izany koa ny hazakazaka UCI hafa: ho an'ny laharana faharoa dia mahazo isa 800 ianao, ho an'ny toerana 675 ary ho an'ny toerana fahaefatra 575, ary mitohy izany, manana ny hevitrao ianao. Raha mandresy ny iray amin'ireo Grand Tours hafa ianao, dia lazao ny Tour de Italia na ny Vuelta a España, dia mahazo 850 ianao.
Mba hanehoana ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny fanatanjahantena dia mavesatra ihany koa ireo tsangambato, ireo no hazakazaka dimy andro malaza indrindra. Ka manana an'i Paris Roubaix, ny Tour of Flanders, Milan San Remo, Liège Bastogne Liège ary Il Lombardia ianao. Raha mandresy ny iray amin'izy ireo ianao dia hanangona isa 600, izay midika hoe isa.
Rehefa dinihina tokoa, tsangambato roa isan-taona dia mendrika mihoatra ny sandan'ny fitsidihana. Ny tompon-daka eran-tany sy ny hazakazaka amina lalana olympika koa dia eo an-tampony manana isa 600 atolotra ho an'ireo hazakazaka roa tonta. mamaritra ny kariera, ary ireo teboka natolotra dia taratry izany.
Ireo hazakazaka iray andro hafa izay lehibe nefa tsy dia malaza loatra araka izay voalaza teo aloha dia vitsy ny teboka atolotra. Ohatra tsara dia mety ho toa an'i Strade Bianche, izay ahazoana isa 400 ny mpandresy. Ny hazakaza-tsokajy isan-kerinandro toa an'i Paris Nice, Tirreno-Adriatico ary ny Critérium du Dauphiné dia mitentina 500 isa ho an'ny mpandresy amin'ny ankapobeny, midika izany fa ambany kely noho ny hazakaza-dahatsoratra fahatsiarovana misy fomba maro hafa ahazoana isa, koa ny ahy dia ny fanambarana fa ny tsangambato roa dia sarobidy kokoa noho ny Tour de France, hadalana tanteraka.
Ohatra tsara amin'izany ny Tour Down Under, izay isa mitovy isa no atolotra ho an'i Paris Nice na Tirreno-Adriatico. Ny antony mahatonga an'io dia tsara izao, ary izy io dia mamporisika ny ekipa sy ny mpamily handray anjara amin'ny hazakazaka amin'ny lafiny hafa eto an-tany izay somary vaovao ary mitranga amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana satria misy sy teboka sarobidy maro. raha te ho mpandresy amin'ny UCI, midika izany fa tsy maintsy mandray anjara ny ekipa UCI rehetra. Ireo hazakazaka tsy dia miorina tsara dia manome isa 300 ho an'ny mpandresy, ary ao anatin'izany ny zavatra toy ny Ride London Surrey Classic, ny Tour of California, ary Omloop Het Nieuwsblad.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, tsy momba ny fametrahana GC fotsiny izany. Amin'ny hazakazaka an-tsehatra dia betsaka ny isa UCI ho an'ny fandresena sy ny fametrahana eo amin'ny dingana tsirairay, ary ireo dia miverina amin'ny toerana faha-5. Araka ny tenin'i Sean Kelly, ny Tour de France dia manome bonus lehibe indrindra miaraka amin'ny isa 120 izay azo omena fandresena an-tsehatra, raha mandresy dingana dimy amin'ny fitsangatsanganana ianao, dia mitovy amin'ny isa ho an'ny tsangambato, na izany aza, ny zava-bita Mark Cavendish vita.
Ny fandresena amin'ny dingana an'ny Giro na ny Vuelta dia mitentina 100 isa, raha ny hazakazaka an-tsehatra hafa toa an'i Paris Nice dia manome kely kokoa, isa 60 ho an'ny fandresena iray. Fa misy teboka ihany koa amin'ny fanaovana akanjon'ny mpitondra. Tsy dia be loatra izany, noho izany dia mahazo isa 25 isan'andro ianao amin'ny fanaovana ilay akanjo mavomavo amin'ny fitsangatsanganana ary tsy mahazo afa-tsy 10 isa isan'andro ianao manao ilay akanjo lava amin'ny ocher amin'ny fitsangatsanganana Down Under, ary raha toa ianao ka mandresy ny iray amin'ireo ireo naoty hafa, toy ny mavomavo sprinter maitso na fanasokajiana tendrombohitra ao anaty fitsangatsanganana dia hahazo isa 120 ianao amin'ny fanasokajiana ankapobeny.
Manantena aho fa hitanao fa mahasoa sy mahaliana ity lahatsoratra ity ary raha mba omeo ankihiben-tanana izy io ary diniho ny fizarana izany amin'ny namanao satria heverinay fa tena mahafinaritra ho an'ny mpihaino midadasika kokoa ny mahatakatra ny fomba fiasan'ireny World Tour ireny ka mahatonga olona maro hanaraka ny fanatanjahan-tena, tsy hoe rehefa atao ny Tour de France, fa mandritra ny fampitana ny hazakazaka manontolo. Ary ny rafi-pandrefesana dia feno pitsopitsony, ary tsy nandinika ny antsipiriany rehetra aho mba hampidi-doza ity lahatsoratra ity ho lahatsoratra lava sy mankaleo, fa raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mandroaka azy ireo amin'ireo hevitra etsy ambany. . Raha manontany tena ianao, ny rafi-pandrefesana vehivavy manerantany dia mitovy amin'ny an'ny lehilahy ihany, na dia tsy mitovy aza ny isa, ary eto amin'ny GCN dia nalefanay mivantana sy maimaim-poana ireo hazakazaka lehibe, koa raha te hahita azy ireo ianao , ho eo ny tsindry misy azy ireo eto raha hahazoana rohy mankamin'ny pejinay izay nandefasana azy ireo.
Fa mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka dia omeo singan-tanana ny lahatsoratra ary ho hitanay ianao avy eo, veloma.
Ahoana no fiasan'ny tompon-daka amin'ny bisikileta?
nyFIALàlanaTompondaka eran-tanyElite Men's Road Race dia hetsika iray andro iray ho an'ny matihaninampitaingina bisikiletymitranga isan-taona izany. Ny hazakazaka iray dia hazakazaka 'fanombohana marobe' miaraka amin'ny mpandresy no voalohany eo ampitan'ny andalana rehefa vita ny halaviran'ny hazakazaka feno.
Ahoana no hahaizanao ny tompondaka eran-tany amin'ny UCI?
fahaizanaamin'ny alàlan'nyFIALehilahy kontinanta latsaky ny 23 firenena mitana ny laharana amin'ny 17 aogositra 2021 - Ireo firenena 5 voalohany ao amin'ny laharana Men latsaky ny 23 isa isa araky ny firenenaFIAAfrica Tour: ny firenena laharana voalohany dia mety hiditra mpitaingin-tsoavaly 5 hanombohana; ny firenena laharana faha-2 dia mety hiditra mpitaingin-tsoavaly 4 hanombohana; ireo firenena laharana faha-3 ka hatramin'ny faha-5 dia mety hiditra 304.06.2021
Iza no nandresy tamin'ny bisikileta 2020?
Julian Alaphilippe no vaovaoTompondaka eran-tany UCI, mamarana ny fiandrasana an'i Frantsa 23 taona.27 Sep 2020
Firy amin'ireo Britanika no nahazo ny Tour de France?
Hatramin'ny nananganana ny fifaninanana tamin'ny 1903, sivyanglisympitainginaeFAnitarika ny fanasokajiana ankapobeny ao amin'nyTour de Franceamin'ny faran'ny sehatra iray mandritra ny iray amin'ireo andiany 103 an'ny Toursan'i Frantsa. Hatramin'ny faran'ny taona 2018fitetezam-paritra, io dia mitovy amin'ny dingana 101 rehetra.
Tokony handeha bisikileta ve aho sa handeha bisikileta?
Mandehanadia ampiasaina amin'ny hetsika izay misy ny hetsika amin'ny endrika -ing. iSIKAnandehamitoby eo akaikin'ny farihy tamin'ny fahavaratra lasa teo. Hetsika hafa izay mandray 'Mandehana'dia: dihy, fihazakazahana, hazakazaka, fitsangantsanganana, mitaingina, lomano,bisikileta, fiakarana sns.19 Sep 2013
Aleo mandeha bisikileta toy izay mihazakazaka?
Ny isan'ny kaloria entinao mandritra ny fanatanjahan-tena dia miankina amin'ny hamafin'ny faharetanao sy ny halavan'ny fotoana anaovanao azy. Amin'ny ankapobeny,mihazakazakamandoro kaloria bebe kokoanoho ny bisikiletasatria mampiasa hozatra bebe kokoa. Na izany aza,bisikiletamalefaka kokoa amin'ny vatana, ary mety ho vitanao ela kokoa izanynaHaingankaingananoho nyianao dia afakamihazakazaka.21 jan. Feb 2020
Iza no bisikileta lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra?
Raha tsorina, Eddy Merckx nobisikileta lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ilay lehilahy nantsoina hoe 'The Cannibal' dia nanjakan'ny matihaninabisikiletatoy ny tsy misy olon-kafa ary nandresy ny hazakazaka manan-danja rehetra dia ny mandresy.22 Sep 2017
Iza no mpitaingina Tour de France lehibe indrindra?
Fandresena mandroso amin'ny dingana 2 ao amin'nyTour de Francedia nanamafy ny satan'i Mathieu van der Poel ho an'izao tontolo izaobisikileta lehibe indrindraeto amin'izao tontolo izao, hoy i Sir Bradley Wiggins.28 Jona. 2021
mpanazatra kinetika kirk
Zava-pisotro Koala - fitadiavana vahaolana
Inona no sotroin'ny bera koala? Miantehitra amin'ny sakafon'ny ravina kininina izy ireo, izay mazàna mandany 500 hatramin'ny 800 grama isan'andro. Ny teny Koala dia heverina fa tsy midika fisotroana amin'ny iray amin'ireo fiteny Aborigine Aostralianina. Koalas dia voalaza fa tsy hisotro rano maimaimpoana any an'ala, na hisotro fotsiny indraindray.4 2020.
drafitra fanatanjahan-tena taorian'ny lozam-pifamoivoizana
Drafitra fanatanjahan-tena aorian'ny lozam-pifamoivoizana - vahaolana azo ampiharina
Azoko atao ve ny manao gym aorian'ny fivontosan'ny clavicle? Zava-dehibe ny hitazomana ny soroka hisorohana ny hamafiny fa tsy hampitombo ny ratra. Aza atao mihetsika sy mihetsika mihoatra ny 6 herinandro. Fanaraha-maso: Ho hitanao ny manam-pahaizana momba ny soroka tokony ho 6 herinandro aorian'ny ratra nahazo anao.
ity lalana ity dia manomboka amin'ny santa fe ary miafara amin'ny los angeles.
Ity lalana ity dia manomboka amin'ny santa fe ary miafara amin'ny los angeles. - vahaolana mifantoka amin'ny hetsika
Làlana inona no nanomboka tany Santa Fe ary nifarana tany Los Angeles? ny Lalana Espaniola taloha
latabatra medaly olimpika 2012
Latabatra medaly olimpika 2012 - ny fomba fanapahana hevitra
Iza no nahazo ny ankamaroan'ny medaly tamin'ny Lalao Olaimpika 2012? Etazonia (Etazonia)
mijanona eo amin'ny bisikileta
Mitsangana bisikileta eny an-dalana - fanontaniana mahazatra
Tokony ho afaka hijoro ambonin'ny bisikileta ve ianao? Ny zana-kazo diamondra mahazatra (misy bara ambony mitsivalana), ho an'ny fampiasana ny làlana, dia tokony ho refesina mba hahafahanao mijoro faladiana ambonin'ny latabatra ambony miaraka amin'ny sisiny 'ahazoana aina' (fa tsy eo intsony) eo anelanelan'ny bar sy ny entana eo ambonin'ny bara. .
bisikileta gt andiany 5
Bisikileta Gt andiany 5 - vahaolana maharitra
Tsara ve ny bisikileta amin'ny lalana GT? Ny manam-pahaizana dia somary maivana ihany, tena haingana sy mahazo aina mitaingina mitaingina fifadian-kanina lava. Henjana ny endriny nefa tsy dia mafy loatra ary mamono tsara ny tsy fahatomombanana eny an-dalana. Ny bisikileta ihany koa dia mitantana tsara; manana hatramin'ny 48 mph (midina) ary mafy orina ny hafainganam-pandehany.